Chitendero Nemari: Ungavimba Nani?
Ungavimba Nechitendero Chako Here Panyaya Dzemari?
Estelle * uyo aiva nevana vanomwe uye aienda kuchechi nguva dzose anoti: “Ndakaudza mufundisi wangu kuti ndaida kudzidza Bhaibheri.” Asi mufundisi wake haana kana kumboda kumudzidzisa. Saka akazorega kuenda kuchechi. Anoenderera mberi achiti: “Vakuru vekuchechi vakandinyorera vachingondiudza kuti kana ndaisakwanisa kuenda kuchechi, ndaingofanira kuvatumira mari. Ndakafunga kuti, ‘Havana basa nokuti ndaenda kuchechi here kana kuti kwete, vanongoda mari yangu chete.’”
Angelina uyo aifarira zvechechi nguva dzose akati: “Kuchechi kwedu kwaifambiswa bhasiketi katatu pose pataienda kunonamata, uye taitarisirwa kukanda mari pose paraifambiswa. Vaingogara vachikumbira mari. Ndakafunga kuti, ‘Mwari haafariri vanhu vakadai.’”
Machechi ekwaunogara anotorera vanhu mari nenzira dzakahwanda uye nedzimwe dziri pachena here? Izvozvo zvinoenderana nezvinodzidziswa neBhaibheri here?
Jesu uyo akatanga chiKristu akati: “Makagamuchira pachena, ipai pachena.” (Mateu 10:8) Shoko riri muBhaibheri haritengeswi uye rinofanira kupiwa munhu wese anorida.
VaKristu vokutanga vaibhadhara sei zvaidiwa muungano?
Mumwe nemumwe aipa “sezvaakasarudza kuita mumwoyo make, asinganyunyuti kana achigombedzerwa, nokuti Mwari anoda munhu anopa achifara.” (2 VaKorinde 9:7) Muapostora Pauro akati: “Takakuparidzirai mashoko akanaka . . . , tichishanda usiku nemasikati, kuti tirege kuisa mutoro unorema pane mumwe wenyu chero upi zvake.” (1 VaTesaronika 2:9) Pauro aiita basa rokugadzira matende kuti azvitsigire muushumiri hwake.—Mabasa 18:2, 3.
Zvapupu zvaJehovha zvinowanzoitira misangano yazvo muzvivako zvisingashamisiri zvinonzi Dzimba dzoUmambo. Vanowana sei mari? Havatombofambisi tundiro twokukumbira mari, kana kuti kutumira vanhu mahamvuropu vachikumbira zvipo. Asi, chero munhu anokoshesa urongwa hwokunamata, anogona kukanda chipo chake mubhokisi remupiro muImba yoUmambo asingatsvaki kuonekwa.
Chitendero chinofanira kuwana sei mari?
Zviri pachena kuti magazini ino inoda mari kuti idhindwe uye itakurwe. Asi hauzombofi wakaona pachiitwa zvokushambadzira kana pachipiwa zviziviso zvokukumbira mari. Nyaya inongosimbiswa ndeyokupa vanhu vakawanda chokwadi cheBhaibheri.
Unofungei: Nzira iyi yokuunganidza zvipo inoenderana nemashoko aJesu uye nemuenzaniso wevaKristu vokutanga here?
^ ndima 2 Mamwe mazita ari munyaya dzino dzinotevedzana akachinjwa.